Iyada oo la kordhiyo tirada smart phone users, wax badan oo inaga mid ah ayaa laga helay nafteena aan gujinaya kaliya sawirada laakiin sidoo kale sameynta videos of daqiiqado noo gaar ah. Haddii aad isticmaashay telefoonka gacanta in wax lagaga qabto video ah, waa suurto gal ah in marka aad isku dayay u ciyaaro your computer, waxaad helay in laga gediyo iyo hadhay madaxa aad xoqidda. Tani waa qalad lagu arkay telefoonada badan oo fiican sida ugu telefoonada, kuwaas oo aan loogu talo galay inay ka fiirsan nooca halka video Qabsashada .
Waa hagaag, waxaan doonayaa in aan ka soo baxay ayaa kuu sheegi hab, in xal loo helo dhibaatada iyo in sidoo kale in gabi ahaanba waa bilaash ah mid ka mid ah!
Haa, VLC Media Player waa ciyaaryahan warbaahinta si fiican u yaqaan oo lacag la'aan ah oo kaa caawin kara in aad isku shaandheyn video ee wacyigelinta saxda ah iyo hab in la badbaadiyo. Si aad u ogaato sida loo sameeyo, kaliya raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Si aad u bilaabaan oo leh, download iyo rakibi VLC Media Player on your computer, ayaanu ku taxnay link hoos ku qoran:
Website VLC: http://www.videolan.org/
Hadda, ordo VLC Media Player iyo furi video ka your computer oo la khalad wareejiyo
Tag menu ugu weyn oo ay doortaan Tools> Saamaynta oo safeeyuhu
Hagaajinta A suuqa kala yaqaan cusub iyo Raadka waa inay u furnaadaan hadda. Dooro tab Video Raadka.
Marka tab Video Raadka furan yahay, guji Joometri tab loo yaqaan
Joometri waa tab ah in aan u baahan tahay si ay u isticmaalaan si aad u hesho cajaladda video oo ku jira meesha. Marka tab Joometri furan yahay, guji sanduuqa ka bedelaan si ay awood u beddesho. Hubi in ikhtiyaarka 'beddesha ay 90 darajo' ayaa hoos loo doortay. Riix dhow haatan inuu ka baxo suuqa kala this.
Waxaad isku shaandheyn kartaa video in xaglo kala duwan oo ay dooranayso xagal u dhigma halkii beddesha ay 90 darajo doorasho.
Hadda, waa in aad awood u ciyaaro video nasiisay in xagal saxda ah VLC Media Player noqon.
Hadda, si uu u badbaadiyo si sax ah isku beddeli video dib ugu soo laabtaan menu ugu weyn ee VLC Media Player dooro Tools> Waxa aad rabtid.
Tag Dhinaca hoose ee bidixda Settings interface dooro ikhtiyaarka ah oo dhan 'sida u qabo qaybta Show goobaha.
Hadda, heli Output qaybta Stream ee Murayaad bidix iyo ballaariyo in Sout il> Transcode. Ka dib markii in, ka dooro filter Video Isbadal ku hoos Video filter ikhtiyaarka oo guji 'Save' si loo badbaadiyo goobaha kuwan.
Tag menu ugu weyn oo ay doortaan Media> Beddelaan / Save.
Under tab File ah, guji "Add ' si ay u dar faylka video dhawaan saxo ka dibna riix on hoos u soo dhaadhacay arrow dhanka gacanta midigta oo badalo / Save badhanka si ay u doortaan badalo.
Hadda, guji Browse in ay doortaan folder Ahaado (tusaale ahaan Desktop), faylka la gediyay (tusaale ahaan 'Video_1_Rotated') ku qor magaca cusub oo ay doortaan nooca wax soo saarka (tusaale ahaan '.mov').
Bogga la mid ah, waxay kaloo dooran saarka profile sida 'Video - H.264 + MP3 (MP4)' ka dibna riix Tools badhanka dhanka gacantiisa midig si uu bedel profile.
Marka foomka goobaha profile, guji codec ah tab Audio.
Riix hoos u soo dhaadhacay fallaadh u codec iyo MP3 la xusho oo ka dhacay Save.
Waa inaad hadda dib u furmo suuqa badalo noqon, riix Start badhanka si ay u bilaabaan qaab beddelidda.
Marka socodka ah ee diinta ka dhamaato, waa in aad aragto shaashadda la mid ah mid hoos ku siiyo.
Taas ka dib, waa in aad awood u ciyaaro aad video badaley in ciyaaryahan warbaahinta aad jeceshahay noqon.
Kadib markii geedi socodka ah ee qoqobada iyo video badbaadiyo, waa in aad hadda dib Media VLC ka Player in goobaha ay default. Waayo, kan fudud u tag: Tools> aad rabtid oo riix ikhtiyaarka ah oo aad rabtid Warbixannada.
Maxaa dhacaya haddii VLC Media Player uusan awoodin in uu furo video ah?
Haddii ay dhacdo in aadan awoodin in la furo video isticmaalaya VLC Media Player sabab kasta, waxaan heysanaa fursad kale oo weyn oo aad u caawin kara inaad hagaajin video iyo sidoo sida saxda ah. Waxaa loogu yeeraa Wondershare Video Converter Ultimate .
Waxaa loo isticmaali karaa si loogu badalo, kor loogu qaado, edit, gubi , download, qabashada, abaabulo, il iyo daawan videos ee ku saabsan 159 qaabab. Waa maxay sidaas u wanaagsan oo ku saabsan waa in wax kasta waxa aad samaysaan, weligiin ma doonto arrimaha la mid ah sida looxyada maqan, tayada hoose ama shilalka iwm Sidoo kale waa mid ka mid ah video convertor ugu dhaqsiyaha badan in aad ka heli karto suuqa maanta, iyadoo xawaare ilaa 30 jeer ka badan inta kale ee ay competitors.You isku dayi kartaa software cajiib ah taas oo bilaash ah oo ay u soo degsado ka link ah sida hoos ku siiyo.
> Resource > Video > Sida loo shaandheyn video ah oo la isticmaalayo VLC